नेपाली राजनीतिमा धोकाधडी र षडयन्त्रको चलनः जसले ल्यायो उही सकियो - नेपालबहस
नेपाली राजनीतिमा धोकाधडी र षडयन्त्रको चलनः जसले ल्यायो उही सकियो
| १५:०९:५६ मा प्रकाशित
नेपालको राजनीतिमा एउटा आवृत्ति जहिले पनि दोहोरी रहन्छ । जसलाई ल्यायो उसैबाट फालिने । यसका केही उदाहरणहरु तल प्रस्तुत गरिएका छन्, जसले नेपालको भावी राजनीति कतातिर बहकिन्छ भनी एउटा निचोड निकाल्न सकिन्छ ।
बरालिएर हिडिरहेका आफ्ना भाञ्जलाई शक्तिकेन्द्रमा ल्याईदिने माथवरसिंह थापा तिनै भाञ्जा जंगबहादुर राणाबाट मारिएको कुरा इतिहासमा लेखिएको छ । त्यसपछि गोर्खाली थापाहरुको नेपालको राजनीतिमा उपस्थिति नै समाप्त भयो ।
आफ्नो छोरालाई गद्दी दिलाई देला भन्ने लोभमा जंगबहादुरलाई शक्तिमा ल्याउने कान्छी महारानी उनै जंगबहादुरबाट थुनिए ।
जंगबहादुरले सबैभन्दा बढी माया गर्ने कान्छा भाई धीरशमशेरका छोरा वीरशमशेरले आखिर जंग खलकलाई पाटीको बास बनाई छोड्यो । अहिलेसम्म पनि जंगखलकले नेपालमा कही पनि प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सकेको छैन ।
रणोद्दीपले सबैभन्दा बढी विश्वास वीरशमशेरलाई गर्थे । लाहोर पेशावर जानपूर्व साँझ हैन बिहान हतियार दिनुपर्दछ भन्ने सल्लाहकारको सल्लाह नमानी वीर माथि शंका नगर्न उल्टै सल्लाहकारलाई आदेश दिने रणोद्दीप तिनै वीरशमशेरहरुबाट समाप्त पारिए भनी इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ ।
वीरशमशेरलाई सत्ता हत्याउन सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने खड्गशमशेर वीरशमशेरबाट उपत्यका छिर्न नपाउने गरी धपाइए ।
देवशमशेरलाई सबैभन्दा मनपर्नेमा चन्द्रशमशेर नै थिए । उनको सबैभन्दा बढी चाकरी गर्नेमा पनि चन्द्रशमशेर अग्रपँक्तिमा थिए । दिउँसो देवशमशेरको कोटको अविर टक्टकाउने चन्द्रले साँझ उनलाई पाता कसेर धनकुटा लखेटे ।
देवशमशेरलाई धनकुटा धपाई चन्द्रशमशेरलाई गद्दी दिलाउन भूमिका खेल्ने प्रमुख पात्र गेहेन्द्रशमशेर तत्पश्चात कहिल्यै सत्तामा आउन सकेनन् ।
संस्कृत छात्रबासमा निशुल्क आवास, भोजन, शिक्षाको व्यवस्था गरेको राणाशासनको जरो हल्लिने गरी विद्यार्थी आन्दोलन त्यही संस्कृत पाठशालाबाट शुरु भयो ।
नेपालको राजनीतिमा पहिलोपल्ट भारतको भूमिका स्थापित गरेका राजा त्रिभुवनका नातिका पालामा भारतकै कारण राजतन्त्र नै समाप्त भयो ।
तुलसी गिरी, विश्ववन्धु थापालाई कांग्रेसको राजनीतिको मियोमा ल्याउने बीपी कोइरालाको राजनीतिक अवसानमा यी दुवैपात्र पहिलो पँक्तिमा खडा भए ।
राजा महेन्द्रसँग सूर्यबहादुर थापाको परिचय गराई दिने विश्ववन्धु थापा त्यसपछि तिनै थापाका कारण प्रधानमन्त्रीको अवसरबाट वञ्चित हुँदै गए ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा बाामपन्थीहरुलाई संलग्न गराउन हुँदैन भन्ने कोइरालाहरुको मतलाई अस्वीकार गर्ने कांग्रेस र बाम गठवन्धनका प्रणेता गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईको राजनीतिक अवसान तिनै बामपन्थीहरुका कारण हुन गयो, मंगलादेवी, प्रकाशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई निर्वाचनमा पराजित गरेर ।
उपरोक्त सबै उदाहरणहरुले नेपालमा जसले अगाडि ल्यायो त्यसलाई उक्त ल्याइनेबाट समाप्त हुने एउटा गजवको चरित्रगत विशेषता विद्यमान रहेको पाइन्छ । कोही आफै आउँछ भन्ने त्यो हानीकारक हुँदैन । जब ल्याइन्छ अनि ल्याउनेको दुर्दशा र आउनेको भाग्योदय शुरु हुन्छ ।
तमिल टाइगर र साइनिङ पाथको दशाको सँघारमा रहेको माओवादीलाई सुरक्षा, सत्ता र सम्पत्तिले युक्त बनाउन भूमिका खेल्ने प्रमुख पात्र गिरिजाप्रसाद कोइराला उनै माओवादीका कारण सत्ताबाट सदाका लागि हात धुनु पर्यो । नेपालको पहिलो राष्टपति हुने गिरिजाप्रसादको योजना माओवादीकै असहयोग र धोकाका कारण भताभुँग भयो ।
नेपालमा लोकप्रिय कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने ध्याउन्नमा पढेलेखेका युवाहरुलाई भकाभक केन्द्रिय समितिमा स्थान दिंदा तिनै युवाहरुले सीपी मैनालीलाई सदाका लागि पार्टीबाट खेदेरै छोडे ।
आफूले महासचिव पदबाट राजीनामा गरेर प्रचण्डलाई महासचिव बनाउने मोहन वैद्य उनै प्रचण्डबाट कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट नै पलायन हुने गरी खेदिनु पर्यो ।
राजाका कारण क्रमश पाँच र चार चोटी प्रधानमन्त्री हुने मौका पाएका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्दले गणतन्त्रका पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरे ।
विलीन हुन लागेको माओवादीलाई लगभग बराबरीको हैसियत दिएर शक्तिको मूलधारमा स्थापित गराउने केपी ओली नेपाली राजनीतिको चलेको चलनलाई विगत एक वर्षदेखि राम्ररी झेलिरहेका छन् ।
उपरोक्त उदाहरणहरुले नेपालको राजनीतिमा एउटा गज्जवको सूत्र स्थापित हुन गएको छ । कोही आफ्नै बलबुतामा आयो भने त्यो खतरनाक हुँदैन । जब कसैलाई बलजफती शक्तिमा ल्याइन्छ, अनि ल्याउनेको दुर्दशाा शुरु हुन्छ । यसरी शक्तिमा आउनेले ल्याउनेलाई कति पीडा दिन्छ, सो कुराको बयान गरी साध्य छैन ।
श्रोतः नेपालको इतिहास, विभिन्न पत्रपत्रिका प्रकाशित लेखहरु, जीवनी र अन्तवार्ताहरुमा आधारित
देउवा–प्रचण्ड वार्ता जारी ४ दिन पहिले
प्रचण्डकाे वैवाहिक वर्षगाँठमा परिवारको कारुणिक तस्विर ! ६ दिन पहिले
नेपाल पक्षका २० सांसदले गरे राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर,अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारी ६ दिन पहिले
राप्रपाको केन्द्रीय महाधिवेशन स्थगित ८ मिनेट पहिले
पूर्वराजाले दिए शुभचिन्तक तथा आफ्नाे उपचारमा खटिने डाक्टर र नर्सलाई धन्यवाद २० मिनेट पहिले
प्रतिष्ठित व्यवसायी घिमिरेले चीनबाट अक्सिजन सिलिण्डर लगायतका सामग्री ल्याउँदै ३१ मिनेट पहिले
पछिल्लो २४ घण्टामा थप २०३ जनाको मृत्यु, ८५२० संक्रमित १९ घण्टा पहिले
उपत्यकामा बिहीबारदेखि अत्यावश्यकबाहेक कार्यालय बन्द ३ दिन पहिले
संसद बैठक अगावै ओलीको राजीनामा आउने, अल्पमतको सरकार आजै बन्ने ५ दिन पहिले
पर्वतमा २० शय्याको कोरोना अस्पताल सञ्चालन ६ दिन पहिले
उपत्यकामा दुई साता निषेधाज्ञा थप्ने तयारी ५ दिन पहिले
फिलिपिन्समा ५.८ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प ३ दिन पहिले
दलित समुदायलाई राहतसँगै बाख्रा वितरण २ हप्ता पहिले
बाँकेमा अनौठो घटना: स्वाब दिन लाइनमा बस्दाबस्दै ५९ वर्षीय पुरुष ढले ! १ हप्ता पहिले
कोरोनाबाट भारतमा २० सहित २३ नेपालीको मृत्यु २ हप्ता पहिले
वैशाख मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक रोकिने २ हप्ता पहिले
बाँकेमा ज्यानमारा भाइरसबाट ११ दिनमा २७ जनाको मृत्यु ३ हप्ता पहिले
अपि पावरले पायो हकप्रद निष्कासनको अनुमति २ हप्ता पहिले
बहुप्रतिक्षित वेब सिरिज ‘डियर लभ’को टिजर सार्वजनिक २ वर्ष पहिले
अब मेलम्चीमा पानी हाल्दा सीसी क्यामरा जडान गरिने १० महिना पहिले
प्रधानमन्त्रीबाट सम्बोधन १ वर्ष पहिले
प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठक स्थगित ३ हप्ता पहिले